Ithegi: fumana imifanekiso kwi-intanethi | Martech Zone
Ithegi: fumana imifanekiso kwi-intanethi
Sisebenzisa itoni yeefoto zesitokhwe zasimahla. Ukusuka kwiisayithi zethu, iiposti zebhlog, amaphepha amhlophe, kunye nawo wonke umxholo esiwenzela abathengi, i-stock photo bill yethu yayingamakhulu eedola ngenyanga. Kubonakala ngathi kwakamsinya nje ukuba ndiyigcwalise iakhawunti, ayizukufumana nto ngaphakathi kweveki okanye njalo. Sihlawule amaxabiso aphezulu ngesiza esaziwayo sesitokhwe. Yintoni iRoyal-Free yasimahla, okanye imifanekiso yeRF, vumela ukusetyenziswa okulinganiselweyo